कोरोनाविरूद्धको चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज आजदेखि, कहाँ गएर लगाउने ? — Imandarmedia.com
कोरोनाविरूद्धको चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज आजदेखि, कहाँ गएर लगाउने ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको चिनियाँ खोप ‘भेरोसेल’ को दोस्रो डोज आजदेखि लगाइँदै छ । आज बिहान १० बजेदेखि प्रारम्भ हुने खोप अभियानका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा खोप केन्द्र तोकेको छ ।
यो खोप अभियान जेठ ११ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । केही दिनअघि महानगरपालिकाले खोप केन्द्र र समन्वयकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्दै चैत २५ देखि वैशाख १५ गतेसम्म भेरोसेलको पहिलो मात्र लगाएका १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई दोस्रो मात्राको खोप दिने सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
दोस्रो डोज खोप लगाउन जानेले फोटोसहितको परिचयपत्र तथा पहिलो डोजको खोप लगाएको कार्ड देखाएपछि पायक पर्ने जुनसुकै खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सकिने जनाइएको छ ।
यस्तै जाजरकोट- कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नलगाड नगरपालिका–८ हल्चौरमा देवीलाई बलि ( बोका) चढाइएको छ । शनिबार दिउँसो गाउँलेहरु जम्मा भएर कालिका माई देवीलाई बलि दिइएको स्थानीयवासी हरिबहादुर खत्रीले बताए ।